တောင်ကိုးရီးယားနိုင်ငံက ချီးမြှင့်တဲ့ ဆု ရခဲ့တဲ့အတွက် အတိုင်းမသိဂုဏ်ယူကြည်နူးနေတဲ့ ဖွေးဖွေး - News MM
December 6, 2020 December 6, 2020 - by admin
ပရိသတ်ကြီးရေ.. ဖွေးစိန်လို့ အားခုံးက ချစ်စနိုးခေါ်ကြတဲ့ သုံးထပ်ကွမ်းအကယ်ဒမီ မင်းသမီးချောလေး ဖွေးဖွေးကတော့ မြန်မာပရိသတ်တွေအပြင် ပြည်ပပရိသတ်တွေကပါ အားပေးချစ်ခင်ကြသူလေးပဲ ဖြစ်ပါတယ်..။
ဒိတ်ဒိတ်ကြဲအောင်မြင်မှုတွေနဲ့ အနုပညာလမ်းကြောင်းမှာ လျှောက်လှမ်းနေတဲ့ ဖွေးစိန်လေးကတော့ အခုတစ်ခါမှာလည်း တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ Asia Model Festival 2020 ပွဲကြီးမှာ Asia Special Award ဆုကို ရရှိသွားခဲ့ပါတယ်နော်..။
ဆုရရှိခဲ့တဲ့ပျော်စရာသတင်းလေးကို အသိပေးပြောပြထားသလို Covid 19 ကာလ ဖြစ်လို့ Seoul ကို မသွားရတော့ဘဲ
ကိုရီးယားကနေ လှမ်းပို့လိုက်တဲ့ Asia Special Award ကတော့ သူမရဲ့လက်ထဲကိုရောက်ရှိလာပြီဖြစ်တဲ့ အကြောင်းလေးကိုလည်း ဖွေးစိန်လေးက ပြောပြထားပါသေးတယ်နော်..။
“Thank You untact 2020 Asia Model Awards in Seoul ! Thank You For choosing me !💪✨😍🤍 Covid 19 ကာလ ဖြစ်လို့ Seoul ကို မသွားရတော့ဘဲ Asia Special Award ဆုကတော့ Korea ကလှမ်းပို့လိုက်လို့ ဖွေးလက်ထဲရောက်နေပါပြီရှင့်
နောက်နေ့မှ ကျေးဇူးတင်စကားကို စာရှည်ရှည်ရေးပြီး အမှတ်တရပုံရိုက်ပြီးတင်တော့မယ်ရှင့် Heeeee so happyyyy ❄️❄️❄️❄️❄️☃️💃🏻😍🥰😍🥰😀
ဖွေးကို ဒီ Career တလျှောက်လုံးချစ်ပေး အားပေးခဲ့ကြတဲ့ ဆရာ,မိဘ,ဖွေးကို ချစ်ပေးသူ Darlings, Oopsies တဦးတယောက်ချင်းစီ တိုင်း အတွက် ယူတဲ့ ဆုလေးပါရှင်…
I hope you are proud of me . It’s all love. It’s all love. Burmese Actress PP..” ဆိုပြီး သူမရဲ့အပျော်လေးတွေကို ဝေမျှထားတာ ဖြစ်ပါတယ်နော်..။
သူ့ကိုချစ်တဲ့ပရိသတ်တွေကလည်း ဖွေးစိန်လေးအတွက် ဝမ်းသာဂုဏ်ယူနေကြပြီး ကြည်နူးပျော်ရွှင်စွာနဲ့ ချီးကျူးကာ ဆုတောင်းစကားလေးတွေလည်း ဆိုထားကြတာ တွေ့ရပါတယ်နော်..။
ေတာင္ကိုးရီးယားနိုင္ငံက ခ်ီးျမႇင့္တဲ့ ဆု ရခဲ့တဲ့အတြက္ အတိုင္းမသိဂုဏ္ယူၾကည္ႏူးေနတဲ့ ေဖြးေဖြး
ပရိသတ္ႀကီးေရ.. ေဖြးစိန္လို႔ အားခုံးက ခ်စ္စနိုးေခၚၾကတဲ့ သုံးထပ္ကြမ္းအကယ္ဒမီ မင္းသမီးေခ်ာေလး ေဖြးေဖြးကေတာ့ ျမန္မာပရိသတ္ေတြအျပင္ ျပည္ပပရိသတ္ေတြကပါ အားေပးခ်စ္ခင္ၾကသူေလးပဲ ျဖစ္ပါတယ္..။
ဒိတ္ဒိတ္ႀကဲေအာင္ျမင္မႈေတြနဲ႕ အႏုပညာလမ္းေၾကာင္းမွာ ေလွ်ာက္လွမ္းေနတဲ့ ေဖြးစိန္ေလးကေတာ့ အခုတစ္ခါမွာလည္း ေတာင္ကိုရီးယားနိုင္ငံမွာ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ Asia Model Festival 2020 ပြဲႀကီးမွာ Asia Special Award ဆုကို ရရွိသြားခဲ့ပါတယ္ေနာ္..။
ဆုရရွိခဲ့တဲ့ေပ်ာ္စရာသတင္းေလးကို အသိေပးေျပာျပထားသလို Covid 19 ကာလ ျဖစ္လို႔ Seoul ကို မသြားရေတာ့ဘဲ
ကိုရီးယားကေန လွမ္းပို႔လိုက္တဲ့ Asia Special Award ကေတာ့ သူမရဲ႕လက္ထဲကိုေရာက္ရွိလာၿပီျဖစ္တဲ့ အေၾကာင္းေလးကိုလည္း ေဖြးစိန္ေလးက ေျပာျပထားပါေသးတယ္ေနာ္..။
“Thank You untact 2020 Asia Model Awards in Seoul ! Thank You For choosing me !💪✨😍🤍 Covid 19 ကာလ ျဖစ္လို႔ Seoul ကို မသြားရေတာ့ဘဲ Asia Special Award ဆုကေတာ့ Korea ကလွမ္းပို႔လိုက္လို႔ ေဖြးလက္ထဲေရာက္ေနပါၿပီရွင့္
ေနာက္ေန႕မွ ေက်းဇူးတင္စကားကို စာရွည္ရွည္ေရးၿပီး အမွတ္တရပုံရိုက္ၿပီးတင္ေတာ့မယ္ရွင့္ Heeeee so happyyyy ❄️❄️❄️❄️❄️☃️💃🏻😍🥰😍🥰😀
ေဖြးကို ဒီ Career တေလွ်ာက္လုံးခ်စ္ေပး အားေပးခဲ့ၾကတဲ့ ဆရာ,မိဘ,ေဖြးကို ခ်စ္ေပးသူ Darlings, Oopsies တဦးတေယာက္ခ်င္းစီ တိုင္း အတြက္ ယူတဲ့ ဆုေလးပါရွင္…
I hope you are proud of me . It’s all love. It’s all love. Burmese Actress PP..” ဆိုၿပီး သူမရဲ႕အေပ်ာ္ေလးေတြကို ေဝမွ်ထားတာ ျဖစ္ပါတယ္ေနာ္..။
သူ႕ကိုခ်စ္တဲ့ပရိသတ္ေတြကလည္း ေဖြးစိန္ေလးအတြက္ ဝမ္းသာဂုဏ္ယူေနၾကၿပီး ၾကည္ႏူးေပ်ာ္႐ႊင္စြာနဲ႕ ခ်ီးက်ဴးကာ ဆုေတာင္းစကားေလးေတြလည္း ဆိုထားၾကတာ ေတြ႕ရပါတယ္ေနာ္..။
Previous Article ဟန်ငြိမ်းဦးကတော်ရုံလူအကြောင်း မတင်တဲ့အတွက် ဂုဏ်ယူတယ်ဆိုတဲ့ မင်းရတုပိုင်
Next Article ရန်ကုန်မြို့ရှိဆေးရုံကြီးများမှာ ဆေးကုသနေတဲ့လူနာရှင်များကို စောင် ခြင်ထောင်နဲ့အနွေးထည်တွေ ကိုယ်တိုင်သွားရောက်လှူဒါန်းခဲ့တဲ့ ထွန်းကိုကို